ကျွန်တော်ဖြစ်ရပ်မှန်လေးကိုရေးပါ့ရစေ ~ Myanmar Anti Mlm Group
9:23 PM Unknown
(ကိုဇင်ဇေ ခင်ဗျာ ဒါလေးကိုတင်ခွင်ပြုပါ) !!!
(phyu phyu khine)ဆိုတာ ကျွန်တော် အမျိုးသမီးပါ
သူaccount နဲ့ရေးတာ တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့!!!
ခုဒီလိုရေးလို့လည်း ကျွန်တော်ကို သူတော်ကောင်းလို့ မထင်စေချင်ပါ ကျွန်တော်ျတာင်းပန်းသင့်သည့်လူများကို ဒီစာနဲ့တောင်းပန်ခြင်းပါတယ်
တစ်ချို့လည်းစဉ်စားလို့ရအောင်ပါ %%%%%
ကျွန်တော် 2011 ဝန်းကျင်မှာ mlm company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ double crane company နဲ့singapore မှာ စမိတ်ဆက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ မတိုင်ခင် က singapore မှာ အမျိုးသမီး ကော ကျွန်တော်ပါ အတူတူ အလုပ်လုပ်နေတာပါ ###
ကျွန်တော်ကလောဘနဲနဲကြီးတယ် လက်ရှိဝင်ငွေနဲ့ မကြေနပ်ဘူး ငွေပိုရှာချင်တယ် အဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်ထင်ပါသလဲ?????
ကျွန်တော် companyမှာမြန်မာတွေ အများကြီးရှိတော့
ကျွန်တော်ငွေတိုးစပေးတယ် ၁၀၀ ကို ၅ ဒေါ်လာတိုးနဲ့လေ (အဲ့တုန်းကပိုက်ဆံရဖို့ပဲသိတော့ ကောင်းတယ်လို့ပဲမှန်ယူမိတာပဲ) ဒီGroup ထဲမှာ ကျွန်တော်ကိုသိတဲ့လူတွေ ရှိတယ် သူငယ်ချင်းတွေပေးထားတဲ့နာမည်က singapore ချစ်တီးတဲ့ ပြီးတော့ phone card လည်းရောင်းတာပဲ
ဒုက္ခ ရောက်မှာဆိုးလို့ မပြောတော့ဘူးနော် စသဖြင့်ပေါ့
ဒီလိုလူမျိုး mlm နဲ့တွေတော့ လားထားပေါ့
စပြီဗျာ ပစ္စည်းတွေ ၈၀၀$$ ဖိုးလောက်ဝယ်ပြီး စရောင်းတော့တာပဲ
ဘယ်သူတွေကို ရောင်းတယ် ထင်လည်း ငွေတိုးပေးထားတဲ့သူတွေ စအားပေးတာပဲ
ဒုက္ခ စပြီ Downline တွေလည်းရပြီဆိုတော့ တက်လိုက်ရတဲ့ meeting လင်မယားနှစ်ယောင်လုံး
ဘာပြောကောင်းမလည်း အိမ်တစ်အိမ်လုံးဌားထားပြီး အိမ်မှာ အိပ်ချိန်ပဲ ရှိတော့တယ်
သူတို့ပြောတဲ့ time freedom မရခင် အဲ့အလုပ် မလုပ်ခင်ကမှ ကျွန်တော်တို့ အတူတူနေချိန်သွားချိန်ရသေးတယ်
အဲ့mlm နဲ့တွေတော့မှ ငါပါးမက ကိုးပါး ပါမှေက်တော့တာပဲ meeting တက်ဖို့ကြိုးစားရ
one to one တွေဖို့ပြေးရ Opp လိုက်ပြောရ နဲ့ စာျးတာ့လည်း အပြင်မှာ Sat Sun လည်း အပြင်မှာ
စား အပြင်မှာနား ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ လူဂေါ်လီလုံးကိုဖြစ်လို့ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥_¥__¥_¥¥
Singapore မှ mlm လုပ်ချင်တဲ့သူတွေသတိထားပါ
သင်တို့နောက်ကို ဖွတ်Mlm တွေလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်နော် ဖွတ်ကိုက်ရင် ကျွန်တော့လိုပဲဖြစ်မှာနော် &&&&&&&&&&
အင်း ကျန်တဲ့ကုန်ကျငွေ ခဏထား Meeting opp ပြော downline ကူညီ upline သွားတွေ တစ်ခါကို mrt ခက 4$$ စားတာက 5$$ အပြန်မိုးချုပ်လို့ taxi ဌားတာက 10$$ အင်း အနဲ့ဆုံး 10$$ ပဲထားဗျာ မြန်မာငွေ ၈၀၀၀ လောက်ရှိတယ် တစ်ရက်ကိုနော် တစ်လကိုဆိုမနဲဘူး $$$$$$$$$$$$%%%%%
ဘာလည်း အဲ့တုန်းက အဲ့ဒါတွေမသိဘူး
Upline တွေ ရပါတယ်ဆိုတဲ့ သေသေချာချာမသိတဲ့ ဝင်ငွေတွေကိုပဲ သားရေယိုနေတာလေ $$$$$$$$
အင်း ကိုဇင်ဇေ ကမြန်မာပြည်က လူတွေပဲခံ ရတယ်ထင်တာ ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံခြားမှာ လုပ်နေတဲ့ လူတွေလည်း လူမသိ သူမသိခံနေရတာအများကြီပဲ
ကျွန်တော် မလုပ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအများကြီးထဲက
တစ်ချက်က ကျွန်တော့အမျိုးသမီးရဲ့ တောင်းဆိုချက်ပါ
:( :( ############### :( :(
ကို ရေ ဖြူ၁၀တန်းမှာ အမှတ်ကောင်းအောင်
ကျိုးစားခဲ့တယ် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းလည်း ၅နှစ်တက်ခဲ့တယ် singapore မှာလည်းအတွေအကြုံတွေ ယူခဲ့တယ် ဖြူအဲ့လိုကြိုးစားခဲ့တာ
ဖြူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ချင်လို့ပါ ဖြူပင်ပန်းပေမဲ့ပျော်ပါတယ်************
pressure များပေမဲ့ ဖြူပိုကြိုးစားချင်တယ် ****** ပိုက်ဆံနည်းပေမဲ့ ဖြူပျော်တယ် ဖြူတို့သားလေးလည်း ဂုဏ်ရှိမှာပါ တဲ့လေဗျာ ****************
ကျွန်နော် စဉ်းစားတယ် !!!!!!!!!!!!!""
ကျွန်တော်တို့သားလေကို ပေးရမဲ့ အရိပ်လွဲနေပြီလို့
ကျွန်တော့အမျိုးသမီးမှန်သွားတယ် ¥¥¥¥¥¥
သူပညာနဲ့ company တစ်ခုမှာ Project Manager နဲ့ လစာကောင်းနေပြီ ထက်လည်းတိုးတက်အုန်းမယ်
ကျွန်တော်လား ရေလိုက်လွဲခဲ့လို့ ခုမှသင်တန်းတွေတက်နေပြီး singapore ပြန် မြန်မာသင်တန်းသားကြီးလုပ်နေရတာပေါ့ :( :( :(
ကျွန်တော့သူ ငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြချင်တာက မိမိရဲ့ အိမ်မက်ကို mlm နဲ့ ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာထက် လက်တွေဘဝထဲက မိမိရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို ပိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းက ပိုလက်တွေ့ ကျပါတယ် ပိုပြီးမိမိအိမ်မက်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
၁၀၀၀ : ၁ယောက် ဖြစ်တဲ့ mlm ထက် ၁ :၁ မိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာက ပိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ် ************
မြန်မာပြည် ပြန်လာမှ ကြုံရတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ် မိတ်ဆွေ လင်းမယားတွေရဲ့  ဝမ်းနဲ စရာအကြောင်းတွေလည်းပါတာပေါ့
ကျွန်တော် ရပ်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းတွေ ရယ် နယ်မှာ ဒီလုပ်ငန်း လုပ်ပုံတွေပေါ့
mlm ဒုက္ခ မှ ကင်းဝေးပါစေ
Double Crane / Mlm စနစ်ကြောင့်နစ်နာခဲ့ရသူတို၏ရင်ဖွင့်သံများ